९० प्रतिशत निर्वाचन तयारी पूरा – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव – HamroSamrachana
हाम्रो संरचना बुधबार, मंसिर २२, २०७८ 603 Views
सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको छ, त्यो पनि पुन:संरचनापछि स्थानीय तहको । ४८१ गाउँपालिका, २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगर र ४ महानगरमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनबाट एकैपटक ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि बहाल हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले बिदाका दिनमा समेत काम गर्दै निर्वाचन तयारी तीव्र पारिरहँदा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण भई नसक्दा केही अन्योल भने कायमै छ । निर्वाचनको मिति घोषणापछि तयारीका लागि न्यूनतम १ सय २० दिन चाहिनेमा आयोगले ८३ दिन मात्रै पाएको छ । राजनीतिक अन्योलका साथै कम समयका बीच आयोगले गरेको तयारी र निर्वाचनसँग जोडिएका विभिन्न पक्षमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव
२०७४ वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ । अत्यन्तै छोटो समय बाँकी छ । तयारी द्रुत गतिमा गरेका पनि छौं र गर्दै छौं । हाम्रो तयारी ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई तालिम दिएर फिल्डमा खटाउने चरणमा छौं । उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा गइसकेपछि मतपत्रसहितका आवश्यक निर्वाचन सामग्री पठाउँछौं । त्यससँगै मतदाता शिक्षाको पनि तयारी हुँदै छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट तयारीको काम थालिएको छ । मतदातासँग प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गर्न निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता खटिन्छन् । उनीहरूले मतदानबारे विभिन्न प्रकारले सचेत गराउनेछन् । मतदाता नामावली पनि तयारीको चरणमा छ । प्रिन्टमा जान्छ । त्योसँगै मतदाता परिचयपत्र छाप्ने काम सुरु हुन्छ । सबै कुरा हाम्रो ट्रयाकमा छ, कन्ट्रोलमा छ । आयोग सहजै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । तयारी सन्तोषप्रद छ । आफ्नो तयारीमाथि हाम्रो भरोसा छ ।
निर्वाचनमा जान सबै दल तयार नै देखिन्छन् ।
समुन्द्रको झलक Video